यो ६ तरिका अपनाउनुस्, जीवन सहज बनाउनुस्
Friday, 1 Sep, 2017 9:11 AM
हाम्रो दैनिकी यति हलचलपूर्ण र व्यस्त हुन्छ जसले हामीलाई निकै थकाउने गर्दछ । बिहान उठेर काम सुरु भयो साँझ परिहाल्छ यति थाकिन्छ कि केही नयाँ कुरा सिक्ने त ऊर्जा नै बच्दैन । तर, केही यस्ता तरिका पनि छन् तपाईले पनि चाहनु भयो भने मात्र एक मिनेट सिक्न सक्नुहुनेछ । यहाँ त्यस्तै ६ वटा तरिका उल्लेख गरिएको छ–
फोनको ब्याट्री बचाउनुस्
तपाई जहाँ पनि जानु हुन्छ तपाईका स्मार्टफोन वा ट्यावलेट कम्प्युटरमा वाइफाई खोज्न एउटा फंक्शन हुन्छ । यो सधैं काम लाग्ने कुरा हो । तर, यसबाट तपाईको फोनको ब्याट्री निकै खर्च हुने गर्दछ । यदि तपाईलाई लाग्छ कि कुनै स्थानमा वाइफाई फाइने सम्भावना छैन वा तपाईलाई त्यस्तो आवश्यकता छैन, तब वाइफाई फंक्शन बन्द गरेर राख्नुस् र ब्याट्री बचाउनुस् ।
प्रिन्टरको मसी बचाउनुस्
पेपरमा प्रिन्ट निकाल्नका लागि प्रिन्टरको प्रयोग अब करिबकरिब सबै स्थानमा हुन्छ । धेरै प्रयोग गर्दा मसी निकै चाँडै सकिने गर्दछ । मसीको खपत कम गर्नका लागि तपाई गाढाका सट्टा हल्का मसीको चयन गर्न सक्नु हुन्छ । यसका साथै यदि सेटिङमा नर्मलको सट्टा ड्राफ्ट कपी प्रिन्ट गर्नुभयो भने मसी निकै बचत हुनेछ । साथै कही मसी बचत गर्ने फन्टहरुको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ ।
हाछ्यु रोक्ने उपाय
तपाई कुनै यस्तो अवस्था वा माहोलमा तपाईलाई हाछ्यु आइरहेको छ र रोक्न चाहनुहुन्छ । त्यसो हो भने यो तरिका अपनाउनुस् । नाकलाई दुवैतिरबाट दबाउनुस् । कोशिस गर्नुस कि कार्टिलेज पकडमा आओस, फेरि त्यसलाई अनुहारको उल्टो दिशामा घुमाउनुस, यस्तो होस कि तपाई अनुहारबाट नाक उखेल्न चाहनुहुन्छ । स्पष्ट छ, नाकलाई उखेल्ने उद्देश्य होइन, उद्देश्य नाकको कार्टिलेज तान्नु हो । यसो गर्दा हाछ्यु आफै रोकिनेछ ।
अधुरो इमेल त छैन ?
के तपाईले कुनै बेला गलत इमेल पठाउनु भएको छ ? गल्ती त हुन सक्छ । तर, गलत व्यक्तिलाई इमेल पठाउनुबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिला इमेलको पूरा सामग्री लेख्नुस र सबैभन्दा अन्त्यमा उक्त व्यक्तिको इमेल ठेगाना राख्नुस् । यो बानीले गलत इमेल ठेगानामा इमेल जाने सम्भावना रहँदैन ।
आफ्नो छातीमा दुवै हात राख्नुस रफेरि जति जोडले हुन सक्छ दबाउनुस् । यो सरल तरिकाले छाती, काँधको मांसपेशीहरुमा निकै दबाव महशुस हुनेछ । यसलाई आइसोमिट्रिक अभ्यास भन्ने गरिन्छ, जसमा कमभन्दा कम हरकत हुन्छ तर मांसपेशीहरु बलियो बन्ने गर्दछ ।
आफैलाई सोध्नुस् ‘किन?’
तपाईको दिनचर्याका काम र चयनको असर तपाईको स्वास्थ्य, खुसी र पूरै जीवनमा पर्दछ । उदाहारणः खानपानको चयन, त्यस्ता कुरा किन खानु जुन स्वास्थ्यका लागि राम्रो छैन ? कुनै काम किन त्यसै गर्ने जस्तो कि हामी कतिपय काम गरिरहेका हुन्छौ । शायद यो सजिलो तरिका हो तर सबैभन्दा राम्रो होइन । र, कुनै काम नगर्नु नै कतिपय अवस्थामा सबैभन्दा सही हुनसक्छ । मात्र एक मिनेट रोकिनुस र आफैलाई सोध्नुस् ‘किन?’